Head Office, Fishery & General Service - Ngwe Pinlae Livestock Breedings & Fisheries Co.,Ltd.
/ Head Office, Fishery & General Service
Head Office, Fishery and General service is operating fishing with joint venture companies. In addition, it is co-operating with Processing Plant (Myeik), Ice Making Plant (Yangon), Fishmeal Plant( Yangon), and Machinery Service (Nay Pyi Taw) as partner companies.
ရုံးချုပ်၊ ငါးဖမ်းနှင့် အထွေထွေဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းသည် အကျိုးတူကုမ္ပဏီနှင့် ပူးပေါင်း၍ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါသည်။ ထိ အပြင့် မြိတ်မြို့တွင် အေးခဲထုတ်လုပ်ခြင်းစက်ရုံ ၊ ရေခဲထုတ်လုပ်ခြင်းစက်ရုံ၊ ငါးအစာမှုန့် ထုတ်လုပ်ခြင်းစက်ရုံ နှင့် ယန္တရားငှားရမ်းခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတို့နှင့် မိတ်ဖက် အဖြစ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
Head Office, Fishery & General Service Gallery